Ireo trano fandraisam-bahiny 10 tsara indrindra tafiditra ao amin'ny trano rehetra hoy ny TripAdvisor. | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | nosy
Raha mieritreritra ny hanao dia ianao dia azo inoana fa nanomboka nanontany ny namanao sy ny namanao momba ny hotely tian'izy ireo indrindra izy ireo amin'ny faritra tianao haleha andro vitsivitsy irery, amin'ny maha mpivady, amin'ny maha fianakaviana. na miaraka amin'ny namanao. Fa angamba ny tena mahaliana anao dia tsy ny toerana halehanao, fa ny trano fandraisam-bahiny tianao haleha.
Misy olona izay rehefa mandeha dia manome lanja be ny hotely, satria tiany ny mipetraka amin'ny trano fandraisam-bahiny, toy ny rehefa mandeha mitsangantsangana ny olona iray izay te hanao azy satria ao anaty fotodrafitrasa izy ireo (ankoatr'izay ary mazava ho azy fa afaka hivezivezy ary hahita ny fahagagana avy amin'ny ranomasina). Fa raha te hahalala ny hotely misy fandraisam-bahiny tsara indrindra mankafy tanteraka ny fialantsasatrao ianao dia tokony hijery izany TOP 10 trano fandraisam-bahiny hoy ny TripAdvisor amin'ity taona 2015 ity. Diniho!
2 Hotel Maria Cristina, trano fandraisam-bahiny mihaja, San Sebastian
4 Belmond Palacio Nazarenas
7 The Ocean Beach Hotel
9 Hotel Belvedere
10 Hotely Haymarket
Ity trano fandraisam-bahiny azonao atao ity Findin Benalmádena, Espana. Izy io dia trano fandraisam-bahiny tsy mampino miaraka amin'ny toerana tonga lafatra satria ny morontsiraka dia miala kely fotsiny, miaraka amin'ny promenade ary afaka mankafy ny fomba fijerin'ny ranomasina ianao amin'ny andro rehetra amin'ny taona. Ny efitrano rehetra dia malalaka, maoderina ary voaravaka tsiro mahafinaritra. Afaka mahita fomba fijery tsara, serivisy tsara ary vola be ianao.
Jereo ny Vincci Selección Aleysa Hotel Boutique & Spa amin'ny Tripadvisor
Hotel Maria Cristina, trano fandraisam-bahiny mihaja, San Sebastian
Afaka mahita ity hotely ity ianao any San Sebastián - Donostia, Espana. Izy io dia trano fandraisam-bahiny, ka raha mila haitraitra sy kalitao ary faran'izay tsara ianao dia tsy afaka mitsahatra mitsidika. Na dia somary lafo aza ny trano fisakafoanana, dia mendrika ny manandrana ny serivisiny, ny efitranony, ny efitranony ary ny fiainana ao anatin'ny hotely. Ny serivisy dia tsara ary ny efitrano dia manana rivotra mahazatra nefa maoderina amin'ny fotoana iray. Tsy afaka mamoy an'ity ianao!
Jereo ny Hotel Maria Cristina, Hotely famoriam-bola manankarena amin'ny Tripadvisor
Ity hotely ity dia hita ao La Fortuna de San Carlos, Costa Rica. Raha te-handehandeha any Costa Rica ianao dia afaka mahazo ny fomba mahatonga ny mpiasa hahatsapa ho mahazo aina sy karakaraina amin'ny fotoana rehetra. Mahafinaritra ireo suite ary ho talanjona amin'ny hatsaran-tarehiny ianao. Ho fanampin'izany, ny famolavolana ny terrasin'ity hotely ity dia hanome anao fahitana mahafinaritra momba ny Arenal National Park sy zaridaina mahafinaritra. Raha te hankafy eo afovoan'ny paradisa maitso ianao ary maniry hitety an'izao tontolo izao, dia… tsy azo hadinoina ny fitsidihanao ity hotely ity.
Jereo ny Hotely Nayara, Spa & Gardens amin'ny Tripadvisor
Ity hotely ity no ho hitanao any Cuzco, Peroa ary io no iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny firenena. Voafidy tsara ireo efitrano, manana extra extra mirentirenty toy ny savony organika vaovao notapahan'ny mpandroso sakafo ao anaty trano fidiovana izy ireo. Na dia tsy mahazatra anao aza ny fanananao mpiasa ao amin'ny serivisinao manokana dia mety ho zavatra hafa izany. Talohan'ny naha hotely azy dia monasitera izany ka ilaina ho fantatra ireo fotodrafitrasa sy fotodrafitrasa. Any an-tendrombohitra no misy azy ireo ary raisin'izy ireo izany, izany no antony misy rafitra iray afaka manome oksizenina hanoherana ny vokatry ny haavo. Ambonin'izany, serivisy miavaka.
Jereo ny Belmond Palacio Nazarenas amin'ny Tripadvisor
Ho hitanao ity hotely ity ao Barcelona, ​​Espana. Raha te-handehandeha any Barcelona ianao dia afaka mahita hotely tsy mampino maro ary ity dia iray amin'izany. Trano fandraisam-bahiny misy toerana tena tsara sy afovoany, misy serivisy manara-penitra sy efitrano mihaja, dia hahatonga anao hankafy ny iray amin'ireo hotely tsara indrindra eto an-tanàna.
Jereo ny Hotel Olivia Balmes amin'ny Tripadvisor
Hahita ity hotely ity ianao ao amin'ny tanàna mahagaga Pamplona, ​​Espana. Na dia eo amin'ny 15 minitra miala eo afovoany aza izy io, dia mendrika ny fitsidihana ity hotely ity satria mahavariana. Efitra malalaka sy maoderina, serivisy lehibe, sakafo maraina avo lenta ary toerana averina tsy misy fisalasalana.
Jereo ny AlmàPamplona Muga de Beloso amin'ny Tripadvisor
Hahita ity hotely ity ianao any atsimon'ny saikinosy misy antsika, marina any Mijas, Espana. Miaraka amin'ny dobo iray ary mitazana ny ranomasina ity dia trano fandraisam-bahiny misy hevitra tsy mitovy momba ny fitsidihana azony io. Voatanisa ho iray amin'ireo tsara indrindra araka ny TripAdvisor izy io, fa raha te hahalala raha tena mendrika izany dia tsy maintsy mitsidika azy ianao. Tena tsara ny serivisy, malalaka sy maoderina ireo efitrano.
Jereo ny Hotely Ocean Beach amin'ny Tripadvisor
Afaka mahita ity hotely ity ianao Gramado, Brezila. Raha handeha ho any Brezila ianao dia tokony ho fantatrao fa natao ho an'ny mpivady ity trano fandraisam-bahiny ity, ka raha te-hanao tantely manokana ianao ... ity no ho toeranao. Fa raha tsy manana mpiara-miasa ianao ary mitady fandriampahalemana sy filaminana dia ho toerana mety aminao koa izany. Ny toerana dia tsara tarehy, eo akaikin'ny moron'ny Black Lake ... tena mampino. Hahatsapa ho miavaka ianao isaky ny segondra amin'ny fijanonanao.
Jereo ny Hotel Estalagem St Hubertus amin'ny Tripadvisor
Ity hotely ity dia hita ao Riccione, Italia. Amin'ny maha hotely italiana tsara anao dia ho afaka mankafy rivo-piainana mahafinaritra ianao, miaraka amina mpiasa tsy mampino, miaraka amin'ny torolàlana ho an'ny fitsangatsanganana rehetra, miaraka amin'ny toerana mety sy efitrano tena tsara izay hanomezana fahafaham-po na dia ny olona tena mitaky be aza. Ary raha tianao ny bisikileta dia ho tianao izany, ary raha tianao ny mankafy sakafo tsara koa.
Jereo ny Hotel Belvedere amin'ny Tripadvisor
Ity hotely ity dia hita ao London, Royaume-Uni. Hôtely iray izay matetika manana referansa tsara, manana ny toerana afovoany, ny rivo-piainana milamina, ny serivisy tena tsara ary ny haingon-trano mety ho antitra na kanto… na dia samy manana ny fehiny avy momba ny haingo aza ny tsirairay. Efitra malalaka sy serivisy tena tsara eto afovoan'i Londres, inona no mbola angatahinao?
Jereo ny Hotely Haymarket amin'ny Tripadvisor
Ireo rehetra ireo hotely no asongadin'ny TripAdvisor. Ireo Espaniola dia asongadina ao Espana ary ireo izay tsy, asongadino ho hotely tsara indrindra manerantany. Satria trano fandraisam-bahiny tsara izy ireo, ny vidiny isan'alina dia mety ho avo lenta, noho izany dia tsara ny mankafy azy ireo amin'ny fotoana manokana.
Ho hitanao anefa izany ireo hotely 25 tsara indrindra any Espana ary ny Hotely 25 tsara indrindra eran-tany amin'ny 2015 araky ny TripAdvisor fa raha te hahalala bebe kokoa ianao. Fantatrao ve ny trano fandraisam-bahiny heverinao fa tokony ho voatanisa ho iray amin'ireo tsara indrindra? Lazao anay izay iray!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » nosy » Ireo trano fandraisam-bahiny 10 tsara indrindra tafiditra ao amin'ny trano rehetra hoy ny TripAdvisor.
Bali, nosy tsara tarehy indrindra any Indonezia